VAR စနစ်ကို စပိန်စူပါဖလားပွဲစဉ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ကျင့်သုံးမယ်
VAR စနစ် အသုံးပြုသွားမယ့် စပိန်စူပါဖလားပွဲစဉ်
10 Aug 2018 . 3:40 PM
ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ ဆီဗီလာအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမယ့် စပိန်စူပါဖလားပွဲစဉ်မှာ ရုပ်သံအကူဒိုင်စနစ် (VAR)ကို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကစားမယ့် စူပါဖလားပွဲစဉ်မှာ VAR စနစ်ကို အသုံးပြုသွားမယ်လို့ စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (RFEF)က တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ VAR စနစ် အသုံးပြုမယ့်သတင်းကို RFEF က အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ ဆီဗီလာအသင်းတို့ကလည်း ၂၀၁၈ စပိန်စူပါဖလားပွဲစဉ်မှာ အသုံးပြုဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စပိန်စူပါဖလားပွဲစဉ် ကစားမယ့် Stade Ibn Battouta ကွင်းအတွင်း VAR စနစ် စမ်းသပ်မှုတွေကို မနက်ဖြန် (စနေနေ့)ညမှာ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ RFEF က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က “စူပါဖလားပွဲစဉ်မှာ VAR အသုံးပြုမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နိုင်ငံတကာဘောလုံးဘုတ်အဖွဲ့ချုပ် (IFAB)ကလည်း သဘောတူ လက်ခံခဲ့ပြီး မော်ရိုကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘောလုံးကွင်းကြီးထဲမှာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှုတွေကို ပြုလုပ်သွားတော့မှာပါ”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ကျော့စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး တစ်ကျော့တည်းကစားသွားမယ့် ၂၀၁၈ စပိန်စူပါဖလားပြိုင်ပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စပိန်နိုင်ငံပြင်ပ ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် စပိန်ပြည်တွင်းဖလားတွေဖြစ်တဲ့ လာလီဂါနဲ့ ဘုရင့်ဖလားပြိုင်ပွဲတို့မှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ အသင်းတွေ ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ် စူပါဖလားလုပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ဘာစီလိုနာအသင်းက ပြည်တွင်းဖလား (၂)လုံးစလုံးကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဘုရင့်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့တဲ့ ဆီဗီလာအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ (၁၂)ရက်နေ့မှာ ကစားမယ့် စပိန်စူပါဖလားပြိုင်ပွဲကို မော်ရိုကိုနိုင်ငံ၊ တန်ဂီယာမြို့ရှိ Stade Ibn Battouta ကွင်းမှာ ကျင်းပသွားမှာပါ။ တန်ဂီယာမြို့မှာရှိတဲ့ Stade Ibn Battouta ကွင်းဟာ ပရိသတ် (၄၅,၀၀၀)ဝင်ဆံ့ပြီး မော်ရိုကိုနိုင်ငံအနေနဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကို ပထမဆုံး လက်ခံကျင်းပသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စူပါဖလားပွဲစဉ်ကို စပိန်ဒိုင်လူကြီး Carlos del Cerro Grande က ကွင်းလယ်ဒိုင်အဖြစ် တာဝန်ယူကိုင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ရုပ်သံအကူဒိုင်အဖြစ် Jesus Gil Manzano လက်ထောက်အဖြစ် Angel Nevado Gonzalez က တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်း RFEF က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Photo:SkyscraperCity, ytimg.com, Marca
Aung Kyaw Wai (Akhayar)
VAR စနဈ အသုံးပွုသှားမယျ့ စပိနျစူပါဖလားပှဲစဉျ
ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့ ဆီဗီလာအသငျးတို့ ယှဉျပွိုငျကစားကွမယျ့ စပိနျစူပါဖလားပှဲစဉျမှာ ရုပျသံအကူဒိုငျစနဈ (VAR)ကို အသုံးပွုသှားမှာဖွဈပါတယျ။ အခုတဈပတျ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ကစားမယျ့ စူပါဖလားပှဲစဉျမှာ VAR စနဈကို အသုံးပွုသှားမယျလို့ စပိနျဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ (RFEF)က တရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။ VAR စနဈ အသုံးပွုမယျ့သတငျးကို RFEF က အတညျပွုပေးခဲ့ပွီး ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့ ဆီဗီလာအသငျးတို့ကလညျး ၂၀၁၈ စပိနျစူပါဖလားပှဲစဉျမှာ အသုံးပွုဖို့ ဆန်ဒရှိခဲ့တယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ စပိနျစူပါဖလားပှဲစဉျ ကစားမယျ့ Stade Ibn Battouta ကှငျးအတှငျး VAR စနဈ စမျးသပျမှုတှကေို မနကျဖွနျ (စနနေေ့)ညမှာ ပွုလုပျသှားမယျလို့ RFEF က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
စပိနျဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျက “စူပါဖလားပှဲစဉျမှာ VAR အသုံးပွုမယျ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို နိုငျငံတကာဘောလုံးဘုတျအဖှဲ့ခြုပျ (IFAB)ကလညျး သဘောတူ လကျခံခဲ့ပွီး မျောရိုကိုနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ဘောလုံးကှငျးကွီးထဲမှာ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ ဆနျးစဈမှုတှကေို ပွုလုပျသှားတော့မှာပါ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ နှဈကြော့စနဈကို ဖကျြသိမျးပွီး တဈကြော့တညျးကစားသှားမယျ့ ၂၀၁၈ စပိနျစူပါဖလားပွိုငျပှဲကို ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ စပိနျနိုငျငံပွငျပ ကစားသှားမှာဖွဈပါတယျ။ နှဈစဉျ စပိနျပွညျတှငျးဖလားတှဖွေဈတဲ့ လာလီဂါနဲ့ ဘုရငျ့ဖလားပွိုငျပှဲတို့မှာ ဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ အသငျးတှေ ရာသီအဖှငျ့ပှဲစဉျအဖွဈ စူပါဖလားလုပှဲကို ယှဉျပွိုငျကစားကွတာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ဘာစီလိုနာအသငျးက ပွညျတှငျးဖလား (၂)လုံးစလုံးကို သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ဘုရငျ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့တဲ့ ဆီဗီလာအသငျးနဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားသှားကွမှာဖွဈပါတယျ။
သွဂုတျလ (၁၂)ရကျနမှေ့ာ ကစားမယျ့ စပိနျစူပါဖလားပွိုငျပှဲကို မျောရိုကိုနိုငျငံ၊ တနျဂီယာမွို့ရှိ Stade Ibn Battouta ကှငျးမှာ ကငျြးပသှားမှာပါ။ တနျဂီယာမွို့မှာရှိတဲ့ Stade Ibn Battouta ကှငျးဟာ ပရိသတျ (၄၅,၀၀၀)ဝငျဆံ့ပွီး မျောရိုကိုနိုငျငံအနနေဲ့ ကွီးကယျြခမျးနားပွိုငျပှဲတဈပှဲကို ပထမဆုံး လကျခံကငျြးပသှားရမှာဖွဈပါတယျ။ စူပါဖလားပှဲစဉျကို စပိနျဒိုငျလူကွီး Carlos del Cerro Grande က ကှငျးလယျဒိုငျအဖွဈ တာဝနျယူကိုငျတှယျသှားမှာဖွဈပွီး ရုပျသံအကူဒိုငျအဖွဈ Jesus Gil Manzano လကျထောကျအဖွဈ Angel Nevado Gonzalez က တာဝနျယူသှားမှာဖွဈကွောငျး RFEF က သတငျးထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
by Ko Kyue .6hours ago
စီးရီးအေပွဲစဉ်(၄)ရဲ့ မီလန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာ ဘယ်အသင်းအသာရသွားမလဲ
by Ko Kyue . 18 hours ago
Cristiano Ronaldo ကို ဘာဂါကျွေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး(၃)ဦးထဲက (၁)ဦးကို ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီ
by Ko Kyue . 22 hours ago
by Ko Kyue . 1 day ago
ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ငွေသုံးအများဆုံး နည်းပြစာရင်းမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ Mourinho
အက်စတာနာကို အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲမှာ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Greenwood